Creamy Jalapeno Dip နှင့်အတူ Taquitos တင်ခဲ့သည် - ချက်ပြုတ်နည်းများ
ချဉ်သောမုန့်နှင့်အတူကြက်သားနှင့် stuffing casserole
ချိုမြိန် hush ခွေးပေါက်စပျားရည်ထောပတ်စာရွက်
Creamy Jalapeno Dip နှင့်အတူ Taquitos တင်ခဲ့သည်
ဤသည်အရသာ Creamy Jalapeno Dip အပြည့်အဝတင်ဆောင် taquitos ၏ဂန္အရသာနှင့်အတူperfectlyုံစုံလင်သောစာရွက်အားလုံးအတွက်! ၎င်းသည်ဂိမ်းနေ့သို့မဟုတ် taco ညဖြစ်သည်ဖြစ်စေလူတိုင်းသည်အရသာရှိသော jalapeno ကျဆင်းမှုဖြင့်ဤလျင်မြန်ပြီးလွယ်ကူသောရေခဲမုန့်ကိုချစ်ကြလိမ့်မည်!
ငါတို့ကဲ့သို့ဂိမ်းနေ့အတွက်သင်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား ငါမိနစ် 20 အောက်မှာအတွက်အဆင်သင့်သောလူအစုအဝေးနှစ်သက်စာရွက်ထက်ပိုကောင်းတဲ့ကြိုက်နှစ်သက်အများကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျညီမျှခြင်းမှအပြည့်အဝတင်ဆောင် taquitos ကဲ့သို့အရသာရှိတဲ့အရာတစ်ခုခုအတွက်ဆခွဲကိန်းသောအခါ (လုပ်စုစုပေါင်း cinch များမှာ) ငါရိုးရှင်းစွာမဆီးတားနိုင်ပါ!
ငါချစ်သောအရာတစ်ခုမှာ Taquitos သူတို့ပြင်ဆင်ထားရန်ဘယ်လောက်လွယ်ကူသည်။ ငါဒီနေ့ချက်ပြုတ်ဖို့ဟိုဆေးအိုလီနဲ့လက်တွဲခဲ့ရတာစိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့သည်ကျွန်ုပ်သည်ပွဲနေ့တွင်ကျွန်ုပ်၏သွားရည်စာများဖြစ်သည့်အပြင်အချိန်မရွေးအတူတကွစုရုံးရန်အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်သည်။
sopapilla cheesecake ကိုရေခဲသေတ္တာထဲမှာထားဖို့လိုတယ်
သင်၏ပွဲနေ့အမှုထမ်းများအားကျွေးမွေးရန်အတွက်ဤစာရွက်ကိုပိုမြန်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်စတင်ပါသည် ဟိုဆေး Ole taquitos ပူပြင်း။ ကြည်လင်သည့်အထိသူတို့ကိုဖုတ်ပါ။
Jose Ole taquito ကိုမင်းတစ်ခါမှမခံစားဖူးဘူးဆိုရင်တော့ပြောင်းထားတဲ့အမဲသားနဲ့ zesty အစိမ်းရောင်ချီလီတွေပေါ်မှာလှိမ့်ဝင်နေတဲ့လတ်ဆတ်တဲ့ဖုတ်ထားတဲ့ပြောင်းဖူး tortilla ရဲ့အရသာကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ယခု၊ ထိုအရသာရှိသောအတွေးကိုနောက်အဆင့်သို့ယူပြီးသင်အကြိုက်ဆုံးဖြည့်တင်းမှုများထည့်ပါ။ မှန်သောအိပ်မက်ဆိုးဖြစ်ပုံရသည်။ !
ထို့နောက်ငါပြီးပြည့်စုံသောကျဆင်းမှုနှင့်မိုးရွာရွာများအတွက်အလွန်အကျွံမဟုတျဘဲ, creamy ဖြစ်သည့်ရိုးရှင်းသောကျဆင်းလာကိုဖန်တီး! ဤအ Creamy Jalapeno Dip taquitos ၏အရသာနှင့်ရောနှောခဲ့သည်! သင်အနည်းငယ်ပိုအပူလိုလျှင်မျိုးစေ့များနှင့်အမြှေးပါးများကို jalapenos တွင်ထားပါ။ အကယ်၍ ၎င်းသည် smoky အရသာဖြစ်ပါကသင်သည်သင်၏ငရုတ်ကောင်းကိုတောင့်တသည် jalapenos ကင်နိုင်ပါတယ် ! လွယ်ကူသော ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်ပြီးမတ်တတ်ရပ်။ အနည်းငယ်ထူလာနိုင်သည်။
သင်မည်သို့စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်ကိုကန့်သတ်ချက်မရှိပါ တင်ဆောင် taquitos ဒီစာရွက်ထဲမှာ! ကြက်သွန်၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ cilantro နှင့်ရောစပ်ပြီး Creamy Jalapeno dip ကိုကြိုက်နှစ်သက်သည်။ သင့်ရဲ့ taquitos ကိုအနံ့အရသာပေးနိုင်တဲ့သင်ကြိုက်တဲ့ toppings တွေကိုသုံးပြီးသူတို့အားနှစ်မြှုပ်။ ပျော်ပါစေ။
ပြင်ဆင်ချိန်၁၀ မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်၇ မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်၁၇ မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၁၀ စားသုံးခြင်း စာရေးသူHolly N. ဤသည်အရသာ Creamy Jalapeno Dip အပြည့်အဝတင်ဆောင် taquitos ၏ဂန္အရသာနှင့်အတူperfectlyုံစုံလင်သောစာရွက်အားလုံးအတွက်! ကစားပွဲနေ့လား taco ညလားပဲလားလူတိုင်းကအရသာရှိတဲ့ jalapeno ကျဆင်းမှုနဲ့ဒီမြန်ပြီးလွယ်ကူတဲ့ရေခဲမုန့်ကိုချစ်ကြလိမ့်မည်! ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢၁ သတျတော ဟိုဆေး Ole အမဲသား Taquitos (သို့မဟုတ်သင်အကြိုက်ဆုံးအရသာ)
▢နှစ် jalapenos အမျိုးအနွယ်ကိုဖယ်ရှားရပ်တ
▢၁ ခွက် အဆွေတော်
▢၁ လေးညှင်း ကြက်သွန်ဖြူ
▢¼ ခွက် မေonnaise
▢ချစ်သူ သို့မဟုတ် Cotija ဒိန်ခဲ
Blender ထဲတွင် Jalapeno နှစ်မျိုးပါဝင်သောအရာများကိုပေါင်းစပ်ပါ။ ချောမွေ့သည်အထိရောနှော 30-60 စက္ကန့်။ အနည်းဆုံးတစ်နာရီအအေးခံပါ။
အထုပ်လမ်းညွှန်ချက်များအရ Jose Ole taquitos ကိုမီးဖို၌ပြင်ဆင်ပါ။
မီးဖိုထဲမှ taquitos များကိုဖယ်ရှားပါ၊ creamy jalapeno ကျဆင်း။ အလိုရှိသည့် toppings နှင့်အတူမိုးရေပေးပါ။
အမှုတော်ထမ်းဘို့အပို Creamy Jalapeno Dip နှင့်အတူအမှုတော်ကိုထမ်းရွက်။
သော့ချက်စာလုံးCreamy Jalapeno Dip နှင့်အတူ Taquitos တင်ခဲ့သည် သင်တန်းအချစ် ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုချက်ချင်းကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝတားမြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။
လတ်ဆတ်သော Mango ဆော့စ်
Jose Ole ကိုယ်စားကျွန်ုပ်ရေးသားသောပံ့ပိုးကူညီမှုရှိသောစကားဝိုင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါထင်မြင်ချက်များနှင့်စာသားအားလုံးငါ့ဥစ္စာဖြစ်ကြ၏။